Home » Arts & Humanities » ကျောက်စ်တည်မိတဲ့ သမုဒယဆည်…
Hollywood ရုပ်ရှင်တေ လို ခုမှ နောက်ကြောင်း ပြန်တယ်လားးးး
အမှန်တော့ မင်္ဂလာ နှစ်ပါတ်လည်တုန်းက “ရွာထဲက ဖူးစာ” ဆိုပြီး ပို့စ်တင်မလို့ ရေးပြီးသား…
အဲ အဲ… တစ်ခါတလေ လျှာနဲ့သွား ကတောက်ကဆဖြစ်ရင်တော့ စိတ်ညစ်သပေါ့… ခွိ
၀ီလီလေး.. ရွာ့မြေးလေးမို့.. တရွာလုံးချစ်ပါ့ဗျာ…
အဟီး… ပြောမည့်သာပြောရတာ ယောက္ခဖကို ဒဲ့ပွါးရတာ မလွယ်ဘူး သဂျီးရဲ့…
“မြေးလေးရေ… မြေးလေး” ဆိုပြီး ပီတိတွေဖြစ်နေလေရဲ့…
မနှင်းကမှ ကမာမ​ကျေနဲ့သိပ်​​သေး။ ကျွန်​မ ​ယောက်​ခမကြီးက သူ့က​လေး​တွေကို ​မောင်​ငယ်​ရင်​​သွေးနဲ့သိပ်​ခဲ့တာတဲ့။ ကျွန်​မက​တော့ အညာသူ ပီပီ က​လေးသိပ်​ရင်​ မာမာ​အေး သီချင်း​တွေကို မထပ်​​အောင်​ ဆိုတတ်​လို့ သူ့  အ​ကြောင်းပြန်​​ပြောပြလို့ သိရတာ။
ပြောရရင် … ကျောက်စ်ကလည်း သီချင်းကောင်းကောင်း မဆိုတတ်ဘူး မမှီရဲ့…
မဖတ်အားသေးလို့ ကြိုမန့် ထားတာဆကျောက်စ်…
အားမကျဘူးလား ဆြာညို… ၂-နှစ်ပြည့်ပြီဗျ… အား ဟိ
ယောက္ခမလောင်းကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီး ကျအောင်ပြောနိုင်တာ နယ်နယ်ရရမဟုတ်။
ပထမဆုံးမြင်မိတဲ့ သင်တန်းသားကတော့ မောင်ဂီ
၀ီလီလေးကတော့ သူ့ကုသိုလ်နဲ့သူ ချစ်မွှေးပါလာတယ် ပြောရမယ်။
ကလေးငယ်ငယ်လေးပေမယ့် ဥပဓိရုပ်က ကလေးနဲ့မလိုက်အောင် တည်ကြည်တယ်။
နောင်မှသိတာ… ယောက္ခဖကြီး သူ့အလှည့်တုန်းက လူစားနဲ့ သွားတောင်းခိုင်းခဲ့တာတဲ့…
အခုလည်း စကားတွေ ဝူးဝူးဝါးဝါးပြော ၊ ဝမ်းလျားမှောက်ချင်နေပြီ…
အံမခန်းကိုကိုကျောက်စ် ရဲ့ချစ်ရေချစ်ရာ ရည်းစားစာရေးနည်း ပိုးပန်းနည်း မိန်းမတောင်နည်း ဟိုနည်းဒီနည်း သင်တန်းဖွင့်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ရွာထဲမှာလူပျိုသိုးလေးများ ဂေါ်မစွန်လူပျိုးကြီးများ စာရင်ပေးသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း……….
လှော်ပေးလိုက်တာ ရွာထဲမှာ တစ်တွဲတော့ တရားဝင်ဖြစ်သွားပြီ အကိုကြီးရဲ့…
ဟမ်း… သူတို့ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုရင် လူကြီးလုပ်ပြီး တောင်းရမ်းပေးရဦးမယ်ထင်ရဲ့…
သမက်​ဆိုတာလည်း.. တချိန်​ကျ ​ယောက်​ခမပြန်​ဖြစ်​မှာပဲ.. အဲ့​တော့.. သမီးမ​မွေးနဲ့..
သမီးလေးတော့ လိုချင်သား … နှလုံးသားမရှိသူတွေက ဂုတ်ဆာလို့ ခေါ်မှာစိုးလို့… ခွိ
ဆည် ဆောက်ပြန်ပတဲ့..ဗျို့ …
အဟိ… ကျောက်စ်ရဲ့ဆည်က လျှပ်စစ်မီးတော့မထွက်ဘူး…
သားတစ်ယောက်တော့ထွက်ထားတယ် ၊ ခရိုနီများ ဝဲလ်ကမ်းပါ… ခွိ ခွိ
ဝီလီတို့ လူနဲ့တူပြီး လူဝါးဝပုံ သိတတ်ပုံက ဩချတယ် အရီးရေ…
နေ့လွဲ ညစာပါ ချက်ပြုတ်ပြီးမှ ရုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျား… အဟီး အဟီး
အမှန်က လေ ကျောက်စ် ရဲ့။
“ဒက်ဒီ …. သမီး ရဲ့ ရွေးချယ်မှု စွမ်းရည် ကို မယုံလို့လား။ ယုံလိုက်စမ်းပါ” လို့ ပြောလို့။
အခုတောင် သူ့ချစ်ဒက်ဒီပါပါးကြီး က သူ့သမီး ရဲ့ အစွမ်းကို ကြိတ်ကြိတ်ပြီး ချီးမွမ်း နေလောက်ပြီ။ :-)))
ပထမဆုံးပြောချင်တာက. . . ဦးကျောက် စာရေး အလွန်ကောင်း
မြန်မြန် လူ့တာဝန်ကျေတော့ ကိုရင်ဒညင်းဝက်ရဲ့…
ဥစ္စာဆိုတာ ကံဉာဏ်ဝီရိယ … သူ့အကျိုးပေးနဲ့သူဗျား…
.ကျောက်စ်တည်တဲ့ဆည်ဆိုတော့ “ကျောက်စ်ဆည်”ပေါ့ဗျာ
.စကားတီတီတာတာပြောတတ်ချိန် ကျောက်စ်တို့မောင်နှံ ပိုရူးမည်အတတ်ပြောပါအံ့
ရူးရတာလည်း မပြောနဲ့တော့ ဆြာမိုက်ရေ… ဒိုးလုံးရဲ့ သီချင်းလို “အရိုးထိအောင်ရူး”…
ဝီလီလေး ရယ်ပြ ပြုံးပြ ဝူးဝူးဝါးဝါးလုပ်နေရင် လောကကြီးကို မေ့ရော…
မင်းလူရဲ့ “အချစ်လား သူဖျားနေတယ်” နဲ့ ကာရံကိုက်အောင်
ဆင်ဖိုးထက် ချွန်းဖိုးဈေးကြီး ၊ စားစရိတ်နဲ့တင် ဒေဝါလီခံရမှာ… ခွိ ခွိ
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းပြည့်ရပါလို၏ မွအိရေ …
ကျနော်လည်း ဆည်တည်ချင်လိုက်တာ ၊
အဟိ… ကိုမြိုးက ဆည်တည်ရမှာမဟုတ်… ရေပိုလွှဲဆောက်ရမှာ…
အထီးကျန်ဆန်တဲ့ဘဝက အခုမှ ပြည့်စုံ အဓိပ္ပာယ်ရှိသွားတယ်…
အဟွတ်… ကဗျာကတော့ ကူးထားလိုက်ပြီ…
တော်ပါသေးရဲ့ ထိပ်ပြောင်လေးမမွေးလို့… ဟီ ဟိ
ကိုကျောက်ခဲနဲ့ မနှင်းဇာတ်လမ်းကတော့ မန်းဂေဇက်အတွက် အမှတ်တရ တကယ်အဖြစ်အပျက် ဇာတ်လမ်းလေးပါဘဲ။
. ကျောက်စ် တို့ ဇာတ်လမ်း က Happy Ending လေး မို့
ဒီလောက် ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ မြ ကိုများ ပါးကွက်သား လို ရုပ်ကြမ်းကြီး လို့ ထင်နေသပေါ့ လေ။
ကိုရင် ရဲကိုကိုရေ… လူဆိုး… ခွိ
သားကလေး လမစေ့ဘဲမွေးပေမည့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်တာလည်းပါသပေါ့ဗျာ…
ဆြာကျောက်ရဲ့ ဥာဏ်ပညာ ချစ်ခင်ကြင်နာ အမြော်အမြင်ရှိမှုနဲ့ ထူထောင်ထားတဲ့
(ဆည်) မိသားစုလေး ကို လေးစားအားကျ အတုယူနေပါကြောင်း
ဆြာစည်… ခီညားတို့လည်း အရွယ်ရှိတုန်း သမီးလေးမွေးဗျာ… ဟွိ
အသားအရောင်ခွဲခြားတာတော့ ဟုတ်ဖူးရယ်… ဒီအဆင်နဲ့ ဒီအဆင် ဘီလိုရအောင်ပိုးလဲ မချွင်းမချန် တစ်ဗုဒ်လောက် လုပ်ပါအူး :mrgree:
. အဖြူရောင် ဆိုတာ အမဲရောင် တွေကြားထဲ
♫ ♪ ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ♫ ♪
အခု တော့ အမဲရောင် လေး က အဖြူရောင် တွေကြား ပို ထင်းနေတော့မှာ။
ဒါထက် ကျောက်စ် ရေ – ဝီလီ လေး ကို “သားသားလေး ကို မင်း မေကြီး ထက် ပိုချစ်သကွဲ့” လို့ ပြောရဲလား ငင် …..
ဟီး ဟီး အရီး ရန်ထောင်ပြီ…
ဒီနှစ်ကုန်ရင် ခွင့်တွေသတ်ရမှာမို့ လာလည်ချင်လည်မှာနော်… ခိ
. ကျောက်စ် – အတည် ဆိုရင် အိမ်မှာ တည်းလို့ ရ တယ်။
Oxford မှာ လည်ချင်လည်း တည်းစရာ စီစဉ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လာသာလာခဲ့။ :-))
ခွီး… ရန်စတယ်လား မယ်ဝေါင်း….
“ချစ်ချင်း မေတ္တာ နှလုံးသားမှာ အရောင်မရှိ” ခွိ ခွိ…
အဟိ… နိုင်ငံတော်သီချင်း ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ရယ်ရလို့ မျက်ရည်တောင်ထွက်တယ်.. နာ့ တီနှင်းရဲ့ သားချော့တေးလေးတွေ မှတ်ထားရမယ်.. ကိုယ့်အလှည့်ကျရင် Snare နဲ့ ချော့ရင်ကောင်းမား စဉ်းစားနေတာ.. ဟိဟိ…
အဟိ အဟိ… ဦးလေးလည်း မျက်လုံးကိုကျယ်ရော…
ရွာပြန်ရောက်ရင် ကလေးထိန်းဖို့ ခေါ်မှာနော်… ဝီလီက အလွန်ချစ်ဖို့ကောင်း…
ဟုတ်ကဲ့ နောင်ဆယ်နှစ်နေရင်ထပ်ပြောဘာ့မယ် အဟိအဟိ ဒီစကားကြားရမလားလို့ ခွိခွိခွိ
တစ်သက် တစ်ချစ် တစ်ယောက်ကမ္ဘာတည်… စိတ်ချ… ပြောင်းဘူး…
ခွိ ခွိ… ကျောက်စ်တို့ ထိန်းပါ့မယ်ဂျ… ဟီ ဟိ
ရေးလက်စတွေရှိတယ် ဒေါ်လေးရဲ့… ဟာသအရွှန်းဖောက်တွေချည်းတော့ မဟုတ်…
ဒီရက်ထဲမယ် အလုပ်ပါးလို့ ပို့စ်တွေ တင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ… ကျေး ကျေး
..ခလေးအမည် အလီဒဲ့လား အူးမွပ်ခဲ.. သုအမေ ဒေါနွတ်နွတ်ကိုလည်း သဒိယဂျောင်း ပေါပေးဗာ..
ကြောင်ဇုတ်… ကျုပ်သား ဝီလီကို အလီလုပ်တယ်…
ဆူဒန်က ဟာရှာလာဘီနဲ့ ညားပါစေ… ခီညားကို သင်းကွပ်ဘူခိပ်လုပ်ဖို့ ကျုပ်တာဝန်ထား… ခွီး
အဟိ… ဝီလီအတွက် ညီမလေးထပ်ယူမလို့ အရီးရဲ့…
ဒီညနေ ဆရာဝန်နဲ့သွားတွေ့ရဦးမယ်… ခွိ ခွိ